आइपिएलको मेगा अक्सनमा दर्ता भएका १५ नेपाली खेलाडी को को छन् ?
२०७८ माघ ८ शनिबार
काठमाडौँ । यस वर्षको आईपीएलको मेगा अक्सन फेब्रुअरी १२ र १३ मा हुँदैछ । शनिबार, भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डले मेघा अक्सनका लागि कुल १२ सय १४ खेलाडीहरूको सूची जारी गरेको छ ।
यी खेलाडीमध्ये ८९६ भारतीय र ३१८ विदेशी खेलाडी छन् । दुई दिनसम्म चल्ने यस मेगा लिलामीमा १० टोलीको सहभागिता रहनेछ । लिलामीमा २७० क्याप्ड खेलाडी, ९०३ अनक्याप्ड खेलाडी र ४१ एसोसिएट देशका खेलाडी दर्ता भएका छन् ।
आइपिएलको मेगा अक्सनमा नेपालबाट १५ खेलाडी दर्ता भएका छन् । अफगानिस्तानबाट २०, अस्टेलियाका ५९, बंगलादेशका ९, इङल्याण्डका ३०, आयरल्याण्डका ३, न्यूजिल्याण्डका २९ खेलाडी दर्ता भएका छन् ।
त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकाका ४८, श्रीलंकाका ३६, वेस्टइन्डिजका ४१, जिम्बाबेका २, भूटानक एक, नामिबियाका ५, नेदरल्याण्डका १, ओमानका एक, स्कटल्याण्डका एक, युएईका एक र अमेरिकाका १४ खेलाडी मेगा अक्सनका लागि दर्ता भएको भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अनुसार सन्दीप लामिछानेसहित १५ खेलाडी आइपिएलको मेगा अक्सनका लागि दर्ता भएका छन् ।
जसमा सन्दीप लामिछाने, आसिफ सेख, पवन सराफ, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेल, सुशान भारी, आरिफ सेख, अविनाश बोहोरा, बिनोद भण्डारी, शरद भेसवाकर, कुशल मल्ल, करण केसी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी रहेका छन् ।
गुजरात टाइटन्स आइपिएलको फाइनलमा
काठमाडौँ । गुजरात टाइटन्स इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को फाइनलमा पुगेको छ । मंगलबार राति सम्पन्न पहिलो क्वालिफायरमा राजस्थान रोयल्सलाई ७ विकेटले पराजित गर्दै गुजरात टाइटन्स फाइनलमा पुगेको हो । राजस्थानले
आइपिएलको पहिलो क्वालिफायर आज, गुजरात र राजस्थानमा को पुग्ला फाइनलमा ?
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२२ टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो क्वालिफायर खेल आज (मंगलबार) हुँदैछ । पहिलो क्वालिफायर नेपाली समयअनुसार राति पौने ८ बजे गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्सबीच प्रतिस्पर्धा
पञ्जावको सान्त्वना जित
काठमाडौं । अन्तिम खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई पाँच विकेटले पराजित गरेसँगै पञ्जाव किङ्सले छैटौं स्थानमा रहँदै इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०२२ टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता टुङ्ग्याएको छ । लिग चरणको अन्तिम खेलमा हैदराबादले
मुम्बईसँग दिल्ली हारेपछि बैंगलोर पुग्यो प्लेअफमा
काठमाडौँ । इण्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत प्लेअफको समीकरण पुरा भएको छ । शनिबार राति सम्पन्न खेलमा मुम्बई इण्डियन्ससँग पराजित भएपछि दिल्ली क्यापिटल्सको आइपिएल यात्रा समाप्त भएको छ । मुम्बईले दिल्ली क्यापिटल्सलाई ६
मधेस प्रदेश: आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा काँग्रेस विजयी